မြီးကောင်ပေါက် 1 မှာ varicocele, 2,3ဒီဂရီ - အကြောင်းတရားများ, ရောဂါ, အကျိုးဆက်များ။ တစ်ဦး varicocele ဆက်ဆံဖို့ဘယ်လိုနေသလဲ?
ပုံမှန်မဟုတ်သောတိုးအောက်ပိုင်းခြေလက်အင်္ဂါ၏သွေးကြော, ဒါပေမယ့်လည်း spermatic ကြိုးများ၏သွေးပြန်ကြောမသာသက်ရောက်သည်။ varicose ၏ဤပုံစံအထူးသဖြင့်အစအဦး၌, အပျိုဖော်ဝင်စတွင်ပိုမိုဘုံ veins အပျိုဖော်ဝင်၏ ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်။ လုံလောက်သောကုထုံးမရှိရင်ရောဂါနောက်ကြောင်းပြန်မလှည်အကျိုးဆက်များဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပါသည်။
varicocele - အကြောင်းရင်းများ
ဆီးရောဂါပါရဂူသေးဖော်ပြထားတဲ့ပြဿနာကိုအစပျိုးလိုက်ခြင်းအတိအကျအဘယ်အရာကိုမသိရပါဘူး။ varicose သွေးပြန်ကြောဂှေးစေ့မျိုးရိုးလိုက်စဉ်းစားသည်ဖြစ်စေအဓိကအချက်တစ်ချက်။ မိသားစုဝင်များအပြားသို့မဟုတ်နှလုံးပျက်ကွက်အလားတူနှလုံးသွေးကြောဆိုင်ရာရောဂါ, ရှိပါကကလေးတစ်ဦးအတွက်ရောဂါဖွံ့ဖြိုးဆဲမှုအန္တရာယ်ကိုသိသိသာသာတိုးပွားစေပါသည်။ မြီးကောင်ပေါက်အတွက် varicocele ၏အခြားစွပ်စွဲချက်အကြောင်းတရားများ:
varicocele - ဒီဂရီ
ဒီရောဂါဗေဒ၏တိုးတက်မှု4အဆင့်သတ်မှတ်။ သုညသို့မဟုတ် subclinical ဇာတ်စင်သွေးကြောမှာအနည်းငယ်တိုးချဲ့ခဲ့သည်။ venography သို့မဟုတ် ultrasound ဖျော်ဖြေတဲ့အခါမှာကလေးတွေအတွက် varicocele ၏ဤကာလအတွင်းအထူးကုသဖြင့်စာမေးပွဲအပေါ်တွေ့ရှိပေမယ့်သွေးကြောများ၏ပြောင်းလဲမှုကိုမြင်နိုင်မရနိုင်ပါ။ အလွန်ခဲရောဂါဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ရောဂါ Subclinical ပုံစံ, မည်သည့်ရောဂါလက္ခဏာအားဖြင့်လိုက်ပါသွားခြင်းမဟုတ်ပါ။
မြီးကောင်ပေါက်အတွက် varicocele 1 ဒီဂရီ
ရောဂါ၏လွယ်ကူသောဇာတ်စင်အဆိုပါ spermatic ကြိုး၏အမြဲတမ်းမဟုတ်သော varicose သွေးပြန်ကြောဖြင့်သွင်ပြင်လက္ခဏာဖြစ်ပါတယ်။ 1 ဒီဂရီမှာသွေးကြောအပြောင်းအလဲများကို၏ဆယ်ကျော်သက်ကလေးဆိုင်းဘုတ်များအတွက် testicular varicocele လည်းရရှိနိုင်ပေမယ့်ပြဿနာကိုစာမေးပွဲဆီးရောဂါပါရဂူအပေါ်ရောဂါနိုင်ပါသည်။ ဒီအဆုံးကျနော်တို့အထူးစမ်းသပ်ထားတဲ့အတွက်အချင်းချင်းအပြန်အလှန်ဝမ်းဗိုက်ဖိအားဖွံ့ဖြိုးသူတွေဟာတိုးလာနေပါတယ်။ ဟာ့ဒ်ဝဲသုတေသနစဉ်အတွင်းရှင်းလင်းစွာမြင်နိုင်မြီးကောင်ပေါက်အတွက် varicocele ၏တိုးတက်မှု၏ကနဦးအဆင့်တွင်။ အဆိုပါရောင်ရမ်းသွေးပြန်ကြောဟာ ultrasound ပုံရိပ်နှင့် phlebography ၏ရလဒ်များကိုအပေါ်ထွက်ရပ်တယ်။
2 ဒီဂရီ Varikotsele
varicose ၏ပျမ်းမျှပြင်းထန်မှုပိုပြီးသိသာ veins, ပျက်စီးရေယာဉ်များကိုပင်ဝမ်းဗိုက်အချုပ်ခန်းခြင်းမရှိဘဲ, ခံစားခဲ့ရနှင့်ဝမ်းဗိုက်ဖိအားတိုးမြှင့်စေနိုင်သည်။ မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်အတွက် varicocele ၏ဤပုံစံကိုမကြာခဏအထူးကုနှင့်အတူလုပ်ရိုးလုပ်စဉ်ကြိုတင်ကာကွယ်ညှိနှိုင်းနေစဉ်အတွင်းရောဂါဖြစ်ပါတယ်။ ရောဂါနှစ်ခုအဆင့်မှာသွေးပြန်ကြော lumen သေးသညျအလှနျတိုးချဲ့မထားပါဘူး, ဒါပေမယ့်သွေးကြောမြို့ရိုးကိုပြီးသားတင်းမာမှုမှဘာသာရပ်ဖြစ်ပါသည်။ ကောင်လေးကရောဂါဗေဒ၏အစောပိုင်းလက္ခဏာများခံစားရနိုင်ပါတယ်။
varicocele တန်း 3
ရောဂါ၏ထုတ်ဖော်ပြောဆို type ကိုကြည့်ရှုရန်လွယ်ကူခြင်းနှင့် Self-စာမေးပွဲဖြစ်ပါသည်။ ပျက်ဆီးနေသောသွေးပြန်ကြောရှင်းလင်းစွာဆေးဘက်ဆိုင်ရာပစ္စည်းကိရိယာများနှင့်ဓာတ်ခွဲခန်းစမ်းသပ်မှုများအဘယ်သူမျှမနှင့်အတူမြင်နိုင်ဖြစ်ကြသည်။ testicular ကျုံ့နှင့်အတူပေါင်းစပ်3အဆင့်ဆင့်အပေါ်ဆယ်ကျော်သက် varicocele ။ အပြောင်းအလဲများမကြာခဏ varicose တစ်ဦးတည်းသာဂှေးစေ့ (ဖြစ်နိုင်ရင်လက်ဝဲ) လုပ်ကြံပင်လျှင်, ကပ်ပယ်အိတ်နှစ်ဖက်စလုံးမပြုလုပ်ရပါ။ မြီးကောင်ပေါက်များတွင်မိုးသည်းထန်စွာ varicocele ရောဂါသိသာလက်တွေ့သရုပ်အားဖြင့်လိုက်ပါသွားသည်။ ယောက်ျားလေးများခံစားရ:
အဆိုပါဝှေးအတွက်အရေပြားအောက်ဆုံး sinuous ဖွဲ့စည်းရေး;
အဆိုပါဝှေးအတွက် varicose သွေးပြန်ကြောဟာသူတို့ရဲ့လုပ်ငန်းဆောင်တာများမျိုးသုဉ်း (သုက်ပိုးထုတ်လုပ်မှု) နှင့်ကျုံ့စေနိုငျသောအကြံပြုချက်များရှိပါသည်။ ဒါဝေးကိုသာအရွယ်ရောက်ပြီးသူများတွင် link ကိုသက်သေပြကူထီး မျိုးမပွားနိုင်ခြင်း နှင့် varicocele - မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်အတွက်ရောဂါ၏နောက်ဆက်တွဲအကျိုးဆက်များနှိုက်နှိုက်ချွတ်ချွတ်လေ့လာခဲ့ဘူး။ ကြောင့်အပျိုဖော်ဝင်ဗိုလ်လုပွဲမတိုင်မီယောက်ျားလေးများအတွက်သုက်ပိုးရယူများ၏အခက်အခဲမှလေ့လာမှုများအတွက်အခက်အခဲများ။ အပျိုဖော်ဝင်စမှာဇီဝကမ္မလက္ခဏာများလည်းမတည်ငြိမ်သောဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ပင်ဇီဝပစ္စည်းများ၏ရှေ့တော်၌ယုံကြည်စိတ်ချရသော, စံသတ်မှတ်ချက်အားဖြင့်ခန့်မှန်းလို့မရပါ။
တစ်ဦး varicocele သိရှိနိုင်ဖို့ဘယ်လိုနေသလဲ?
ကြောင့်တိကျတဲ့ရောဂါလက္ခဏာနှင့်ရောဂါအမြင်အာရုံသရုပ်၏မရှိခြင်းအစောပိုင်းအဆင့်မှာဖော်ပြထားတဲ့ရောဂါဗေဒခက်ခဲအတည်ပြုပါ။ အသွေးတော်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာအကူအညီမရပါဟော်မုန်းအားဖြင့်ရောဂါ - လည်းဓာတ်ခွဲခန်းနည်းလမ်းများသုံးပြီး varicocele detect မရနိုင်ပါ။ ယင်းကပ်ပယ်အိတ်အတွင်း Varicose သွေးပြန်ကြောမရှိသလောက် endocrine မညီမမျှဖြစ်စေနှင့်ဤသာနောက်ပိုင်းမှာအဆင့်ဆင့်ကိုတွေ့ရှိနိုင်ပါသည်။
နည်းစနစ်ကအောက်ပါမြီးကောင်ပေါက်အတွက် varicocele ဆုံးဖြတ်ရန်အသုံးပြုကြသည်:
Valsalva ခဲ့ကြောင်း။ ကောင်လေးကသင့်ရဲ့အသက်ရှုခြင်းနှင့်ပြင်းပြင်းထန်ထန် natuzhitsya ကျင်းပရန်မေးတယ်။ ဤနည်းလမ်းကိုဆန့်တန်ဆာများကိုတိုးချဲ့ဝမ်းဗိုက်ဖိအားနဲ့ရောင်ရမ်းခြင်းအစပျိုးလိုက်ခြင်းဖြစ်သည်။
ultrasound စာမေးပွဲ။ ဒီနည်းပညာသွေးပြန်ကြောတစ်ဦးယုံကြည်စိတ်ချရသောအကဲဖြတ်ပေးသည်နှင့်3လေယာဉ်ထဲမှာကပ်ပယ်အိတ်၏ပြည်နယ်ထင်ဟပ်။
Testikulometriya ။ အထူးကိရိယာ (orhidometra) ကိုသုံးပြီးဝှေးစေ့၏အတိအကျအရွယ်အစားဆုံးဖြတ်သည်။
Doppler ။ သွေးကြောနှင့်၎င်းတို့၏နံရံများ၏အခြေအနေထင်ဟပ်ယန္တရား technique ကိုလေ့လာမှုများ, ။
ကွန်ပျူတာက tomography ။ ဒီနည်းပညာခဲကိုအသုံးပြုသည်က retroperitoneal အကျိတ်ဇုန်နှင့် vena cava အ thrombosis အတွက် varicose သွေးပြန်ကြောထဲကနေခွဲခြားရန်လိုအပ်ပါသည်။
Venography ။ အဆိုပါလေ့လာမှုကိုယောက်ျားအဘို့အအဓိကအားဖြင့်အသုံးပြုသည်။ ဆယ်ကျော်သက်ကြောင့်တဲ့အခါမှသာယခင်ဗားရှင်းများ၏အနိမ့်သတင်းအချက်အလက်အကြောင်းအရာတာဝန်ပေးအပ်ထားပါသည်။
တစ်ဦး varicocele ဆက်ဆံဖို့ဘယ်လိုနေသလဲ?
ယောက်ျားလေးများအပျိုဖော်ဝင်အတွက်ပြဿနာများ၏ကုသမှု၏ရှုပ်ထွေးနောက်ဆက်တွဲ relapses ၏အန္တရာယ်မှာဖြစ်ပါတယ်။ သွေးပြန်ကြောများ၏အပျိုဖော်ဝင်တန်ဆာနှင့်ဝမ်းဗိုက်ဧရိယာအတွင်းရှိဖိအားစဉ်အတွင်းအဆက်မပြတ်နှင့်လျှင်မြန်စွာပြောင်းလဲနေတဲ့ဒါကြောင့်ကောင်လေးက 12 နှစ်ဟောင်းမသည်အထိကုသမှု (varicose သွေးပြန်ကြောများ၏အဘယ်သူမျှမတိကျတဲ့ရောဂါလက္ခဏာတွေရှိပါတယ်လျှင်) ရွှေ့ဆိုင်းဖို့ သာ. ကောင်း၏။
အတော်များများမိဘတွေကဆယ်ကျော်သက် varicocele သူ့ဟာသူသွားရှိမရှိစဉ်းစား။ ဆီးရောဂါပါရဂူဟာအနုတ်လက္ခဏာအတွက်ဤမေးခွန်းကိုတုံ့ပြန်, ရောဂါဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၏မည်သည့်အဆင့်မှာပျောက်ကွယ်သွားပါဘူးဖော်ပြခဲ့သည်။ ခွဲစိတ်ကုသခြင်းမရှိဘဲကုသသေးတီထွင်နိုင်ခြင်းမရှိသေးပေ - ထိထိရောကျရောသူတို့ကိုတိုက်ဖျက်ဖို့တစ်ခုတည်းသောနည်းလမ်းမြီးကောင်ပေါက်အတွက် varicocele ၏ခွဲစိတ်ဖယ်ရှားသည်။ ဆေးဝါးမဟုတ်သလိုရိုးရာချက်ပြုတ်နည်းများကိုမလုံလောက်သောကုထုံးအကျိုးသက်ရောက်မှုထုတ်လုပ်ကြပါဘူး။ ၎င်းတို့၏လွတ်လပ်သောအသုံးပြုမှုမျိုးမပွားနိုင်ခြင်းအပါအဝင်နောက်ကြောင်းပြန်မလှည်ပြဿနာများ, ဦးတည်သွားစေနိုင်ပါတယ်။
မြီးကောင်ပေါက်အတွက် varicocele - စစ်ဆင်ရေး
ခွဲစိတ်၏ချိန်းတစ်နှံ့နှံ့စပ်စပ်စစ်ဆေးခြင်းနှင့်ဟာ့ဒ်ဝဲသို့မဟုတ် tool ကိုရောဂါမဖြစ်မီ။ ဒါဟာမြီးကောင်ပေါက်အတွက် varicocele ၏အတိုင်းအတာများနှင့်ပြင်းထန်မှုဆုံးဖြတ်ရန်ကူညီပေးသည် - စစ်ဆင်ရေးရလဒ်သည်ပုဂ္ဂလဒိဋ္လက္ခဏာတွေနှင့်ယောက်ျားလေး၏အသက်အရွယ်ကနေသီးသန့်ဆီးရောဂါပါရဂူဖြေရှင်းရပါမည်ရှိမရှိ။ လူနာကတော့လုပ်ငန်းကိုအပြီးသတ်ဖို့လည်းနုပျိုသည်ဆိုပါက, varicose သွေးပြန်ကြောအလငျးသို့မဟုတ်တိုးတက်မှု၏ပထမဦးဆုံးစင်ပေါ်မှာဖြစ်ပါသည်, ခွဲစိတ်ကုသမှုနှောင့်နှေးစေနိုင်သည်။ ထိုကဲ့သို့သောကိစ္စများတွင်ယင်းဝှေး၏ပြည်နယ်၏ပုံမှန်ကြီးကြပ်မှုနှင့်ထိန်းချုပ်မှုမှကန့်သတ်။
varicocele - laparoscopic ခွဲစိတ်ကုသ
အနည်းဆုံးထိုးဖောက်ခွဲစိတ်အမျိုးအစားအားဖြင့်ပေးအပ်သည်။ အဆိုပါလုပ်ထုံးလုပ်နည်းယေဘုယျမေ့ဆေးအောက်တွင်ဖျော်ဖြေတာဖြစ်ပါတယ်, ဒါပေမယ့်ရေရှည်ပြန်လည်ထူထောင်ရေးမလိုအပ်ပါဘူး။ မြီးကောင်ပေါက်အတွက် varicocele ၏ laparoscopic ကုသမှုပြီးနောက်နောက်နေ့အိမ်ပြန်သွားနိုင်ပါတယ်။ အပြည့်အဝပြန်လည်နာလန်ထူမှုနှုန်း4ပတ်ကအများဆုံးမှတက်ဖြစ်တယ်, ဒါပေမဲ့ငယ်ရွယ်လူနာအများစုသာ 12-15 ရက်အတွင်းလိုအပ်သည်။ ဘယ်လိုမြီးကောင်ပေါက်တစ် varicocele ခွဲစိတ်ဖြစ်ပါသည်:
အဆိုပါ umbilicus ဒေသ 10 ခု timillimetrovaya ပြွန် (trocar) သတ်မှတ်ထားသည်။ ကမှတဆင့်တစ်ဏုဗီဒီယိုကင်မရာဝင်ကြ၏။
နှစ်ဖက်စလုံးတွင်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာပစ္စည်းကိရိယာများအတွက် "ဥမင်လိုဏ်ခေါင်း" နေသော5timillimetrovye trocars, ဖြည့်စွက်ထားပါသည်။
spermatic ကြိုးအိမ်မှ sutured ။
Trocars ဖယ်ရှားပစ်ပါသည်။ အဆိုပါဒဏ်ရာဟာသူတို့ရဲ့မိတ်ဆက်ထံမှ sutured ဖြစ်ပါတယ်။
varicocele - စစ်ဆင်ရေး Marmara
လုပ်ထုံးလုပ်နည်းဒီဗားရှင်းအရှိဆုံး, နာကျင်မှု့မရှိတဲ့ထိရောက်နှင့်ဘေးကင်းလုံခြုံသည်။ Microsurgical varicocelectomy varicocele ပြုပြင်တခြားနည်းလမ်းများကျော်အရေးကြီးသောအားသာချက်ဖြစ်ပါတယ် - Marmara နေဖြင့်စစ်ဆင်ရေးခဲတစ်ရှူးအနည်းငယ်မျှသာဖြစ်ပါတယ်ဒဏ်ရာရ, ပြဿနာများနှင့်ထပ်မဖြစ်အောင်နှင့်အတူ (ဖြစ်ပွားမှုလျော့နည်းသည်ထက် 4%) ဆက်နွယ်နေပါတယ်, ဆေးရုံတင်ကုသရန်မလိုအပ်ပါဘူး။ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ၏သင်တန်းအမှတ်စဥ်:
ထုံဆေးအောက်ရှိ spermatic ကြိုးထွက်ပေါက် site ကို, သေးငယ်တဲ့ခွဲစိတ် (3 ​​စင်တီမီတာအထိ) ကိုဖန်ဆင်းသည်။
တစ်ဏု၏အသုံးပြုမှုကိုတစ်ခုသို့မဟုတ်မှန်ဘီလူးဏုဆရာဝန်နှင့်အတူပျက်စီးသွေးပြန်ကြောတွေ့ရှိသူတို့ကို bandages ။
အဆိုပါခွဲစိတ် sutured ဖြစ်ပါတယ်။
Endovascular စစ်ဆင်ရေး - varicocele
ခွဲစိတ်ဝင်ရောက်စွက်ဖက်မှုများထည့်သွင်းစဉ်းစားဘို့အခြားအမည် - embolization သွေးပြန်ကြော။ ကလေးများနှင့်ဆယ်ကျော်သက်များတွင် varicocele ၏ထိုကဲ့သို့သောကုသမှုမရှိသလောက်ဖြစ်သောကြောင့်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာဖွံ့ဖြိုးရေးနှင့်သွေးကြောရဲ့ width ၏ပိုင်ထိုက်သော၏တာဝန်ပေးအပ်ထားပါသည်။ endovascular လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများအတွက် femoral သွေးကြောများ၏ကြီးမားသောထိုးဖေါက်ခြင်းအမှုကိုပြု။ တခြားအောက်ပါရေယာဉ်များစိမ့်ဝင်သွားတယ်သောပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ပြွန်ဖြည့်စွက်ပြီးနောက်:
အားလုံးခြယ်လှယ် X-ray စက်၏ထိန်းချုပ်မှုအောက်မှာပြုနေသည်။ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာပစ္စည်းကိရိယာများပစ်မှတ်ရောက်ရှိသည့်အခါသွေးစီးဆင်းမှုပိတ်ဆို့ခြင်းအထူး plug ကိုထည့်သွင်းခြင်းဖြင့် (embolization) ထုတ်လုပ်နေသည်။ ဒီကုသမှု option ကိုလူကြီးများနှင့် 16-17 နှစ်ကထက်အသက်ကြီးတဲ့မြီးကောင်ပေါက်အတွက် varicocele နှင့်အတူကိုင်တွယ်ရန်ပိုကောင်းသင့်လျော်သည်။ ထိုအသွေးတန်ဆာကိုအကျယ်၏ဤအသက်အရွယ်မှာတော့ခွဲစိတ်ပြွန်၏အရွယ်အစားနဲ့ကိုက်ညီ။
စစ်ဆင်ရေး Ivanissevicha varicocele
နည်းလမ်းဖျော်ဖြေဘို့ဤမျိုးစိတ်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများယစ်မျိုးရောင်နောက်ဆက်တွဲဆင်တူပါသည်။ စစ်ဆင်ရေး Ivanissevicha - ပစ္စည်းများ:
အကြောင်းကို5စင်တီမီတာ ileum ဇုန်၏ Oblique ဖြတ်အရှည်ဖြစ်ပါတယ်။
ဘယ်မှာပျက်စီးနေသောသွေးကြောအဆိုပါ retroperitoneal ဧရိယာမှသူ့ကိုတော်အားဖြင့်, ခွဲစိတ်ဆရာဝန်အကျိုးအမြတ်ရရှိမှု။
မြုံတစ်သင်းလုံးကကစားသမားများ၏ထိပ်ပေါ်မှာ superimposed operating sutured ဒဏ်ရာ။
ခြယ်လှယ်ထုံဆေးအောက်တွင်ဖျော်ဖြေတာဖြစ်ပါတယ်, ဒါပေမယ့်ကောင်လေးကဆေးရုံရပ်ကွက်အတွက်ရက်အနည်းငယ်ဖြုန်းဖို့ရှိသည်လိမ့်မယ်။ ယင်းကပ်ပယ်အိတ်တွင် spermatic ကြိုး၏တင်းမာမှုများနှင့်နာကျင်မှုရောဂါ၏လျော့ချရေးအတွက်လျှော့ချရေးများကိုအထူးထောက်ခံမှု corset (3-5 ရက်) ဝတ်ဆင်ရန်လိုအပ်ပေသည်။ ခွဲစိတ်ကုသပြီးနောက် 8-9 ရက်အကြာမှာတာဝန်ပေးအပ် sutures ၏ဖယ်ရှားရေး။
varicocele - ဆိုးကျိုးများ
အဆိုပါသွေးလွှတ်ကြောများနှင့် vas deferens ပျက်စီးမှု;
varicocele ၏ခွဲစိတ်ကုသမှုပြီးနောက်အဓိကအန္တရာယ် - တစ် relapse ။ ၎င်း၏ဖြစ်ပျက်မှုများ၏ဖြစ်နိုင်ခြေရွေးချယ်ထားခွဲစိတ်နည်းလမ်းပေါ်တွင်မူတည်သည်။ အများဆုံးနှစ်သက်ဂျမြား:
laparoscopic ligation ။
Secondary system ကို "ကျောင်း 2100"
အဆိုပါ hymen ကဘာလဲ?
ငါ၏အကာလသောငါ၏ mom, ပြောပြရန်ဘယ်လိုနေသလဲ?
ကိုယ်ဝန်9လ
ခရစ်အီဗန်နှင့် Elizabeth Olsen
Charlize Theron သူမ၏ကလေးများတစ်ဦးချင်းစီကတခြားတွေနဲ့အတူမရကြဘူးသည်ဟုပြောဆိုခဲ့ကြောင်း
ပျင်းရိ belyashi kefir - စာရွက်
ဆောင်ပုဒ် "ရေ" ပေါ်တွင်လက်မှုပညာ
Ronnie Wood ကအဆုတ်ကင်ဆာနှင့်အတူရုန်းကန်နေတာဖြစ်ပါတယ်
တစ်ဦး tan စောင့်ရှောက်ဖို့ဘယ်လိုနေသလဲ?
မင်းသမီး Emilia Clarke ပထမဆုံးနာမည်ကြီးရတဲ့အရာတွေ Rolling Stone ၏အဖုံးပေါ်တွင်ပေါ်ထွန်းသော